कसरी लोगो डिजाइन गर्ने: Most सबैभन्दा आधारभूत नियम - Print Peppermint
कसरी लोगो डिजाइन गर्ने: Most सबैभन्दा आधारभूत नियम
1 सक्छ, 2020 | ब्रान्डिङ, रंग, ग्राफिक डिजाइन, लोगो डिजाइन
यो भन्न सकिन्छ कि लोगो कम्पनीको चित्रण प्रतिनिधित्व हो। यो एक प्रतीक हो जहाँ चारै तिर जान्छ जहाँ संगठनले आफ्नो दाग छाड्छ।
चित्र-श्रेष्ठता प्रभावका अनुसार, व्यक्तिहरू पाठ्य-उन्मुख हुनुको सट्टा दृश्यका सूचनाहरू व्यस्त पार्न र सम्झन सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। फलस्वरूप, एक राम्रो लोगो पक्कै ब्रान्ड मान्यतामा टाउको सुरूवात गर्न द्रुत र भरपर्दो तरीका हो।
टेक्नोलोजीको विकास र द्रुत औद्योगीकरणले घोर प्रतिस्पर्धाको लागि अग्रसर गराइरहेको छ। जहाँसम्म, लोगो डिजाइन गर्ने क्रममा निम्नलिखित rules नियमहरूमा टाँसिदा तपाईंको ब्राण्डलाई ठोस प्रतिस्पर्धी किनारा प्रदान गर्न सकिन्छ।
एक मजबूत फाउंडेशन बिछाउनुहोस्
यो ड्राइंग बोर्ड मा हतार र तपाइँको रचनात्मक रस बहाउन आकर्षक हुन सक्छ, तर यो अक्सर कम्पनी को प्रकृति संग लोगो लोगो छोड्ने परिणाम। राम्रो लोगोले ब्रान्डको बारेमा बलियो कथन चिह्नित गर्नुपर्दछ।
लोगोमा अन्तको चालबाट बच्नको लागि टाढा रहनुहोस्, सही प्रश्नहरू सोध्नुहोस्:
यो के हो जसले तपाईंलाई अलग पार्दछ?
तपाईं कसरी काम गर्नुहुन्छ?
तपाईको मूल मान के हो?
कम्पनीको दर्शन के हो?
एकचोटि तपाईं यो अवस्था पाउनुभयो, प्रारम्भिक स्केचहरू सुरू गर्नुहोस्। स्केचप्याड समात्न र यसलाई पुरानो तरिकामा गर्नमा कुनै शरम छैन!
तपाईं यसलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा स्केच गर्न सक्नुहुनेछ यदि यो तपाईंलाई उपयुक्त छ। तपाईंको विचारहरू पृष्ठहरूमा बग्नुहोस् र स्केचहरूको साथ प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोस् जब सम्म तपाईं आफ्नो लोगोको सार निकाल्नुहुन्न। त्यसपछि यसमा निर्माणको लागि अगाडि बढ्नुहोस्।
सहि रंगहरू छनौट गर्नुहोस्
रंगले ब्राण्डको पहिचानमा निर्णायक भूमिका खेल्छ। यदि तपाईं यस चरणमा गडबड गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्ना लोगोहरू सही भावनाहरू जगाउनको लागि उत्तम अवसर छोड्नुभयो।
मानव मनोविज्ञानको क्षेत्र मा, र psych्ग मनोविज्ञान एक सम्पूर्ण डोमेन गठन गर्दछ। प्रत्येक र colorले अवलोकन गर्ने क्रममा अद्वितीय किसिमको भावनामा किक गर्छ - यलो आशावादी भाइबहरू भएको; रातो उत्साह मा उत्तेजित। त्यसकारण, रंगहरू छनौट गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ जुन तपाईं डेलिभर गर्न चाहनुहुन्छ के अनुरूप छ।
यसबाहेक, एक सक्षम लोगो डिजाइन कम्पनी सँधै निम्न आवश्यक कुराहरूमा टाँसिन्छ र निश्चित गर्दछ कि लोगो:
कालो र सेतो, र ग्रेस्केलमा सार हराउँदैन
अत्यधिक उज्ज्वल रंगहरूमा कटौती गर्दछ जुन निरीक्षण गर्न प्रयास आवश्यक पर्दछ
रंगहरू प्रयोग गर्दछ जुन र wheel्ग पा wheel्ग्राहरूमा नजिक छन्
आदर्श रूपमा, तपाइँको लोगो कालो र सेतो मोडमा काम गर्नुपर्दछ र version्गीन संस्करणमा जस्तै। त्यसो भए, औंलाको अर्को नियम भनेको तपाईको र colors्ग र ग्रेडियन्टलाई कहिले पनि तपाईँको लोगोमा महत्त्वपूर्ण भिन्नता नदिनु हो, किनकि कालो र सेतोमा प्रभाव पछाडि रद्द हुन्छ।
यसलाई सरल र सन्तुलित राख्नुहोस्
एन्टोइन डे सेन्ट एक्सुपरीले भने कि पीईरफिकेसन हासिल गर्न सकिन्छ, जब त्यहाँ थप्न केहि अतिरिक्त छैन, तर जब त्यहाँ केहि लिनको लागि छोड्दैन।
तपाईंको लोगोलाई सहजै सामग्री वितरण गर्न दिनुहोस् र शैली र पदार्थको बीचमा सन्तुलन राख्नुहोस्। यसलाई अनावश्यक र colors्ग र प्रभावहरूसँग अव्यवस्थित बनाउनुहोस्, र तपाईंले सरलताको स्पर्श छोड्नुभयो। तथ्यको रूपमा, अध्ययनहरूले संकेत गर्दछ कि अग्रणी ब्राण्डको बहुमतले उनीहरूको लोगोमा दुई रंगका संयोजन मात्र प्रयोग गर्दछ।
थप रूपमा, यो निश्चित गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंको लोगोको एक अंश विस्तारमा लोड गरिएको छैन कि यो अर्को ओभरडेशोडिंगमा समाप्त हुन्छ।
सरलताको सम्पूर्ण बिन्दु लोगोलाई सजिलैसँग पुन: सजनीय र चिन्न योग्यको रूपमा लिनु हो। पाम मूर अनुसार, एक व्यक्ति लिन्छ परिचित हुन 5-7 अवलोकनहरू लोगोको साथ; तपाईको भन्दा बढि लिन नखोज्नुहोस्। नाइके, म्याकडोनाल्ड्स, र लक्ष्य जस्ता ठूला नामहरूले सरलताको प्रतीक प्रदान गर्दछ: शब्द भन्नुहोस्, र लोगो तपाईंको टाउकोमा पप अप हुनेछ।
पढ्ने योग्यतामा कहिल्यै सम्झौता नगर्नुहोस्
वर्णनात्मक लोगोहरूले ब्रान्डको वफादारीमा ठूलो भूमिका खेल्दछ। यो निश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं तपाईंको लोगोमा टेक्स्टको पढ्न योग्यतामा ईन्सेन्ट्रिक फन्टहरू समावेश गरेर सम्झौता गर्दै हुनुहुन्न।
भाग्य companies०० कम्पनीहरूको सूचीको विश्लेषण पछि, यस्तो देखिन्छ कि% Sans% उनीहरूको लोगोका लागि सैन सेरिफ फन्टमा निर्भर छन्। कारण सरल छ: यसलाई पढ्न सजिलो छ। जहाँसम्म तपाईं आफ्नो पाठमा विविधता समावेश गर्न चाहानुहुन्छ, दुई भन्दा बढी फन्टहरूको लागि जानु एक विपत्ती हो।
प्रकोपको कुरा गर्दै, राम्रोसँग तपाईंको लोगोमा निम्न त्रुटिहरू हटाउनुहोस्:
असंगत पत्र स्पेसिंग
खराब फन्ट आकारहरू
अर्को तत्व जुन तपाईंको लोगोको पठनयोग्यताको लागि आदेश दिन्छ त्यो उचित स्केलिaling हो। यसको मतलब यो हो कि तपाईंको लोगो स्पष्ट रूपमा देख्न र सन्तुलित हुनको लागि पर्याप्त लचिलो छ जब योaको आकारको लागि मापन गरिएको छ व्यापार कार्ड, वा बिलबोर्डको लागि मापन गरिएको।
यसलाई व्यावसायिक देखिने बनाउनुहोस्
कहिलेकाँही हामी हाम्रो सिर्जनात्मकता बाहिर तानिन्छ कि हामी मूल कुरा सही प्राप्त गर्न असफल हुन्छन्। परिणाम स्वरूप, हाम्रो काम परिपक्वतामा छोटो हुन्छ, र यसले दर्शकहरूमा राम्रो प्रभाव छोड्दैन।
यदि हामी ट्विटरको उदाहरणलाई हेर्छौं, कम्पनीले यसको मूल लोगोमा परिवर्तनहरू मात्र गर्यो यसमा आकारहरूको शुद्धतालाई परिष्कृत गर्न। त्यसोभए, यदि तपाईंको लोगोमा आकारहरू समावेश छन् भने, यो निश्चित गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंको लोगो आकारहरू ठीकसँग प्रसारित गर्दछ। वर्ग वर्ग जस्तै देखिएको हुनुपर्छ, आयत होइन।
अर्को आवश्यक तत्व तपाईंको लोगो सिर्जना गर्न भेक्टर-आधारित सफ्टवेयर प्रयोग गर्नु हो। यो महत्त्वपूर्ण छ किनकि स्केलि up माथि, भेक्टर लोगोले यसको गुणवत्ता गुमाउँदैन, रास्टर मोडेलहरूको विपरीत। थप रूपमा, धेरै आधुनिक अनुप्रयोगहरू जस्तै विनाइल काट्ने र कढ़ाई मेशिनहरू भेक्टर मोडेलहरूमा मात्र सञ्चालन गर्दछन्।
यसका साथै, नराम्रो पक्ष अनुपातको साथ लोगोले यसमा राखिएका हरेक रचनात्मक प्रयासलाई बिगार्दछ। अन्तिम कुरा तपाईले गर्न चाहानुहुन्छ तपाईको लोगो अस्वाभाविक देखाउनको लागि अनुपातको क्षैतिज र ठाडो आयामहरू राखेर।
एकचोटि तपाईंले आधारभूत सहि पाउनुभयो, खेललाई माथि बढाउनुहोस् र बहुमुखी प्रतिभाको साथ आउनुहोस्। दर्शकहरूलाई देखाउनुहोस् कि तपाईंको ब्राण्ड तपाईंको प्रतिस्पर्धीहरू भन्दा बाहिर छ तपाईंको लोगोमा केही समावेश गरी तपाईंलाई अलग सेट गर्दछ। कोका-कोला लोगो अझै आइपुग्दा विश्वमा सबैभन्दा पहिचान योग्य लोगोहरू मध्ये छ किनकि यसको आइकनिक कस्टम फन्ट छ।
व्यक्तिहरूले उच्च सम्मानका चीजहरू राख्दछन् जसले उनीहरूको अनुहारमा मुस्कान राख्छ। तपाईं यसलाई सँधै आफ्नो लोगोलाई आकर्षक बनाउन सक्नुहुनेछ यसमा लुकेको तत्व थपेर। त्यस्तै, तपाइँ तपाइँको लोगो मार्फत पनि एक कथा भन्न सक्नुहुन्छ। जति तपाई यस मार्फत कुराकानी गर्नुहुन्छ, तपाईको श्रोतालाई नजीक ल्याउनुहुनेछ।
अन्तमा, निम्न उद्धरणलाई कहिल्यै नबिर्सनुहोस् बारलाई सब भन्दा माथि ल्याउन यो सेट गर्नुहोस्।
"नियम राम्ररी जान्नुहोस्, ताकि तपाईं तिनीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा भ break्ग गर्न सक्नुहुनेछ।"
2020 २०२० टेक्नोलोजी ट्रेंडहरू जसले हाम्रो जीवनलाई सदाको लागि परिवर्तन गर्दछ
Creative लेखकका लागि रचनात्मक व्यवसाय कार्ड विचारहरू →